Porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်း (သို့မဟုတ် CSBD) နှုန်းဖျောပွမကြာမီကလေ့လာရေး
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016)
Volume ကို 56မတ်လ 2016, စာမျက်နှာများ 257-266
မှတ်ချက်များ: ဤ ဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှု (Leuven) ကတွေ့ရှိခဲ့သည် 27.6 လများအတွင်းလွန်ခဲ့သည့်3လများအတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည့်ဘာသာရပ်များ၏ XNUMX% သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပြproblemနာအဖြစ် Self- အကဲဖြတ်. တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
OSAs တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြုံတွေ့ရသည့်အစီရင်ခံမှုဖြေဆိုသူအချိုးအစား 27.6% ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနက် 33.9% က OSA အသုံးပြုရန်အတွက်အကူအညီတောင်းခံရန်စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်.
ကောလိပ်ကျောင်းသားများများထဲတွင်ကျဘာစွဲမြား: A ပျံ့နှံ့နေတဲ့လေ့လာမှု (2017)
လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း စာမျက်နှာများ 1-11 | အွန်လိုင်း Published: 28 မတ်လ 2017 http://dx.doi.org/10.1080/10720162.2017.1287612
အမန်ဒါအယ်လ် Giordano & Craig အက်စ် Cashwell
comments: ကျောင်းသားများသည်တစ်ဦး Cross-စည်းကမ်းစစ်တမ်း (avg သည်။ အသက်အရွယ် 23) တွင် 10.3% (ဘာစွဲများအတွက်လက်တွေ့အကွာအဝေးအတွင်းသွင်းယူယောက်ျား၏ 19% နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ 4%) ။ မှတ်သားဖို့အရေးကြီးတယ် ဒီစစ်တမ်းကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်း၏သင်တန်းသားများကိုကန့်သတ်ထားဘူး။ (လွန်ခဲ့သော ၃ လမှ ၆ လအတွင်းညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြားလေ့လာမှုနှစ်ခုကနမူနာကိုကန့်သတ်ထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးတွင်စွဲ / ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုနှုန်းသည် ၂၈% ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ )
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016 Jun;5(2):169-78. doi: 10.1556/2006.5.2016.036.
comments: ပြီးခဲ့သည့် 18 လအတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူ6ကျော်ယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု။ လေ့လာမှု rကပို့လိုက်တယ် ယောက်ျား၏ 28% ဖြစ်နိုင်သော hypersexual disturb အတွက် cutoff ကို (သို့မဟုတ်အထက်) ရရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦး Porn စွဲအဘယ်သူသည်လား ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း, ဘာသာရေးနှင့်ကငျြ့တရား Incongruence များ၏အခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ပါ
(https://psyarxiv.com/s2017jzf/ 6, သေးထုတ်ဝေမဟုတ်ပေမယ့်အွန်လိုင်းအပြည့်အဝရရှိနိုင်)
ယောရှုသည်ခ Grubbs, ဂျနီဖာတီ Grant က, ယောလ Engelman (Bowling Green ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်) က
ဒေါက်တာ Grubbs အဆိုအရအောက်ပါမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးမှ "ဟုတ်ကဲ့" ဖြေကြားသူကိုညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူနှုန်းထားများထံမှအရွယ်ရှိ 8-20% "ကျွန်မအနေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူကိုယ့်ကိုကိုယ်မခေါ်လိမ့်မယ်။ " "ငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်။ " သို့မဟုတ်: သုံးခုကွဲပြားခြားနားနမူနာအတွက်
ကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2017) ကြားတွင်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အလိင်စွဲလမ်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2017, အတှဲ 15, ပြ1နာ ၂, စစ 16-27
လိင်မှုစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန် SAST-R ၏“ Core Scale” ကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုတွင်ကောလိပ်ကျောင်းသား ၃၃၇ ဦး၊ ၅၇ ဦး ပါဝင်သည်။ (၁၆.၉%) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုတွင်လက်တွေ့ကျသည်။ ကျား, မများကဒီချ Breaking, 17.8 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 15.5% ithe နမူနာလက်တွေ့ cutoff သာလွန်။
တစ်ဦးကအလားအလာလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှုသိပ္ပံမှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီစံကျေပွန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးထံမှသိရှိသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးနောက်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ရမှတ်စာရွက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုလိင်စိစစ်စမ်းသပ် (ISST) မေးခွန်းလွှာအသုံးပြုခဲ့သည်နှင့်ပြည့်စုံအမည်ဝှက်နှင့်လျှို့ဝှက်ခြင်းဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ စုဆောင်းလေ့လာမှုနှင့်အချက်အလက် Microsoft က-ရုံး Excel များကသုံးသပ်ခဲ့သည်များအတွက် 300 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ - ၅၀.၁၅% သောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည်စွန့်စားမှုနည်းသောအုပ်စုတွင်ရှိပြီး ၃၀% သည်ထိခိုက်လွယ်ပြီး ၁၂.၈၅% သည်အန္တရယ်အများဆုံးသောအုပ်စုတွင်ရှိသည်။ Fသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများ၊ 65% သည်အားနည်းချက်များရှိသော်လည်း 21% သည်အနိမ့်အမြင့်တွင်ရှိပြီးကျန် 14% သည်အမြင့်ဆုံးအန္တရာယ်အုပ်စုတွင်ရှိသည်။။ မိန်းကလေးများအတွက် 73% သည်အန risk တရာယ်ကျရောက်သည်၊ 19% သည်ထိခိုက်လွယ်ပြီး 8% သည်အမြင့်ဆုံးအန္တရာယ်အုပ်စုတွင်ရှိသည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ: တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား? (2015)
J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015;41(6):626-35. doi: 10.1080/0092623X.2014.958790.
မကြာခဏ porn လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရငျးနှီးနှင့်အတူ related ခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ဥရောပနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံတွင်ယောက်ျားများလိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအွန်လိုင်းလေ့လာမှု၏အကြီးအကဲအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့သည့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွားသော (၅၉၆ နှစ် = အသက် ၂၃ နှစ်) ရှိအမျိုးသား ၅၉၆ ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သင်တန်းသားအများစု (၆၇ ရာခိုင်နှုန်း) သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
မကြာခဏ masturbated သူကိုလူတို့တွင်, 70% အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက multivariate အကဲဖြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်း, မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အနိမ့်ကြားဆက်ဆံရေးနွေးထွေးမှုသိသိသာသာအတူစုံတွဲလူတို့တွင်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသတင်းပို့၏အလေးသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွားတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။
လူတို့တွင် [2011 အတွက်] အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသူကို [အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွား] 26.1% သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်လူတို့ 26.7% ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအနုတ်လက္ခဏာကသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလိင်ထိခိုက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
comments: Stats ကတော့ယုတ်လျော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူယောက်ျား၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အဘို့ဖြစ်ကြ၏ 26.1% သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ
လိင်စွဲလမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Functions များ (2018) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စားသုံးမှု၏အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်
ကနေ Abstract [ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ် သာယခုအချိန်အထိရရှိနိုင်ပါသည်။ ] အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ
..PATHOS မေးခွန်းလွှာမှသံသယ 28.6% (116 / 405 [အစဉ်အဆက် porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူစုစုပေါင်းဘာသာရပ်များ])
co-ဖြစ်ပေါ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related နှင့်အမူအကျင့်စွဲပြဿနာများကို: တစ်ဦးကလူတစ်ဦးဗဟိုပြု, (2016) ရောဂါချဉ်းကပ် lay
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016 Dec;5(4):614-622. doi: 10.1556/2006.5.2016.079.
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ (က) ကြီးမားသောကိုယ်စားလှယ်နမူနာတွင်မျိုးပွားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ခုတည်း၏ပျံ့နှံ့မှုကိုဖော်ပြရန်နှင့် (ခ) ၀ တ္ထုနှင့်ဆက်နွယ်သောအမူအကျင့်နှင့်စွဲလမ်းမှုပြdistinctနာများကြုံတွေ့နေရသောလူများ၏ကွဲပြားသောအုပ်စုငယ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
နည်းလမ်းများ: လေးယောက်တ္ထုများ (အရက်, ဆေးလိပ်, ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်း) နှင့်ခြောက်လအပြုအမူတွေ (လောင်းကစားဝိုင်း, အစာစားခြင်း, စျေးဝယ်, လိင်, ဗွီဒီယိုနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင်တွေ့ကြုံ Self-စွပ်စွဲပြဿနာများအကဲဖြတ်စစ်တမ်းပစ္စည်းများပြီးစီးခဲ့အယ်လ်ဘာတာ, ကနေဒါ, ကနေ 6,000 ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကကျပန်းနမူနာ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အလုပ်) ။ hierarchical စပျစ်သီးပြွတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (2,728 ဖြေဆိုသူတစ်ဦးသရုပ်ခွဲ subsample အပေါ် Co-ဖြစ်ပေါ်စွဲပြဿနာများ၏ပုံစံများခွဲခြားဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်1,696 အမျိုးသမီးများနှင့် 1032 တို့, M ကအသက်အရွယ် = 45.1 အနှစ် SD ကအသက်အရွယ် = 13.5 နှစ်) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောနှင့်အတူပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြသူ။
ရလဒ်များ: စုစုပေါင်းနမူနာခုနှစ်, ဖြေဆိုသူ 49.2% သုညအစီရင်ခံ, 29.8% တဦးတည်းကဖော်ပြခဲ့သည်, 13.1% နှစ်ခုကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် 7.9% ယခင်နှစျတှငျသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစွဲပြဿနာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။ စပျစ်သီးပြွတ်-သရုပ်ခွဲရလဒ်များကိုတစ် 7-အုပ်စုသည်ဖြေရှင်းချက်အကြံပြုသည်။
comments: ဒီလေ့လာမှုကကနေဒါနိုင်ငံသားများရဲ့နမူနာနမူနာတစ်ခုမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်ပြတဲ့ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှုန်းအောက်တွင်လေ့ရှိကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ တွေ့ရှိချက်များ - အကြောင်းကို 4.8% သူတို့မှာ "လိင်စွဲလမ်းမှု" ရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် (အဖြစ်မှန်အတွက်အနည်းဆုံးစွဲခဲ့သောအုပ်စုတစ်စု၏ 9.5% ဟာသူတို့ရဲ့အဓိကစွဲ porn သို့မဟုတ်လိင်ထင်) ။ စွဲလမ်းမှုနှုန်းဖော်ပြအဆိုပါကောက်နုတ်ချက်:
သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုခုနစ်စပျစ်သီးပြွတ်ဖြေရှင်းချက်အကြံပြုသည်။ စားပွဲတင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း 5, ပထမဦးဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်ကို (Cluster ပို့ချသည့်အခါအသုံးပြုတဲ့နမူနာ၏ 26.0%) ဟာသူတို့ရဲ့ shared ပြဿနာအပြုအမူအဖြစ်ဆေးလိပ်သောက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားပြုသည်။ ဒုတိယစပျစ်သီးပြွတ် (21.8%) ဟာသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပြဿနာအပြုအမူအဖြစ်အလွန်အကျွံစားသတင်းပို့သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်။ စတုတ္ထစပျစ်သီးပြွတ် (16.2%) တစ်ဦးရှင်းလင်းစွာကြီးစိုးအပြုအမူမရှိဘဲကွဲပြားခြားနားသောစွဲပြဿနာများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်နေစဉ်တတိယစပျစ်သီးပြွတ် (13.0%), အလုပ်ပြဿနာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားပြုသည်။
ပဉ်စမစပျစ်သီးပြွတ် (9.5%), တစ်ဦးချင်းစီအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသတင်းပို့အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်စားပြု ဆဌမ (8.9%) နေချိန်မှာနှင့်သတ္တမ (4.7%) ပြွတ်အသီးသီးဟာသူတို့ရဲ့ shared အပြုအမူပြဿနာအဖြစ်စျေးဝယ်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်။ နိမ့်ဆုံးအလွန်အကျွံစား (Cluster II ကို) ကြားတွင်တွေ့ရှိခဲ့စဉ်အတိတ်နှစ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှအားနံပါတ်, အလွန်အကျွံဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသမား (Cluster VII) အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသီးအသီးစပျစ်သီးပြွတ်၏စွဲဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဇယားမှာဖော်ပြထားတဲ့နေကြတယ် 5.
ပျမ်းမျှအသက် 44 ခဲ့သည်
အဆိုပါဘာသာရပ်များသာ 38% အထီးခဲ့ကြသည်
အဆိုပါစစ်တမ်းကို 2009 ၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကုသမှုရှာဖွေသူများအကြားနည်းပညာစွဲ: စိတ်ကျန်းမာရေးဆက်တင် (2017) တွင်စိစစ်ဘို့ဆိုလို
နမူနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသက်အရွယ် 26.67 ၏စံသွေဖည်နှင့်အတူ 6.5 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသက်ဖြန့်ဖြူးနှစ်ပေါင်း 16 မှ 40 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ နမူနာ 45 အထီး (60%) နှင့် 30 အမျိုးသမီး (40%) ရှိခဲ့ပါတယ်။ 17 (22.67%) နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ 57 (76%) (1%) လက်မထပ်ရသေး ရှိ. , 1.33 ကွာရှင်းခဲ့သည်။ လူအားလုံးတို့သည်ဘာသာရပ်များ 10 နှင့်ပညာရေးပိုမိုတစ်နှစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ 36% ကျေးလက်ဧရိယာကနေခဲ့ကြသည်နှင့်အ 64% မြို့ပြဧရိယာကနေခဲ့ကြသည်။
စားပွဲတင်3ခုနှစ်, စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစား, အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းညစ်ညမ်းစွဲခဲ့တဲ့:
အမျိုးသားရေးကိုယ်စားလှယ်နမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ self-နားဆင်နိုင်ပါတယ်စွဲ: စာနယ်ဇင်းများတွင်ဘာသာရေးနှင့်ငျြ့တရား (2018) ၏အခန်းက္ပ,
ပျမ်းမျှအသက် 49, သာအစဉ်အဆက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သောသူတို့အားလည်းပါဝင်သည်။ "ကျွန်မအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်၏": self-အစီရင်ခံညစ်ညမ်းစွဲရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုသုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအရွယ်ရောက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူ (N ကို = 2,075) ၏အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာအတွက် Self-အစီရင်ခံညစ်ညမ်းစွဲဆနျးစစျဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။
ရလဒ်များရလဒ်များကနမူနာအများစုသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုသူတို့၏သက်တမ်းတစ်လျှောက် (n = 1,466) တွင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထက်ဝက်ကျော်ကျော်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ကအသုံးပြုမှုအချို့ (n = 1,056) ။ ထို့အပြင်, rမင်္ဂလာပါ 11 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 3% ညစ်ညမ်းစွဲ၏ခံစားခကျြအခြို့သောသဘောတူညီချက်အစီရင်ခံတင်ပြ.
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်တွေကိုအများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်အထီးလိင်, အသက်အရွယ်နုပျိုသောအသက်, သာ. ကြီးမြတ်ဘာသာရေး, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း သာ. ကွီးမွတျကငျြ့ဝတျ incongruence နှင့်ညစ်ညမ်းပိုမိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
Key ကိုတွေ့ရှိချက်: porn အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းဝေးနေဖြင့်ညစ်ညမ်း (စျယာနျဘာသာတရားကိုအဖြစ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့) မှမိမိကိုယ်ကိုစွဲယုံ၏အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းခဲ့သည်။
Surat အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအကြားစမတ်ဖုန်းနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏ပုံစံ, ဂူ - တစ်ဦးကလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု (2018)
အကြောင်း 62.7 သည့်ယောက်ျားလေးများ၏% နှင့်မိန်းကလေးများ 5.2% ဟာသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်း watched ။ 21.7% [အထီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများက] ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းစောင့်ကြည့်ဖို့စွဲခဲ့ကြသည်။ အကြောင်း 12.4% ယောက်ျားလေးများနှင့် 1.9% မိန်းကလေးတွေ porn ကိုကြည့်သူတို့၏လေ့လာမှုထိခိုက်စေသောဖော်ပြခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းအစ္စရေးကျောင်းမှကျောင်းသား ၁,၁၈၂ ယောက်တွင်ယောက်ျားလေး ၅၀၀ (၄၂.၃၀%) နှင့် ၆၈၂ မိန်းကလေးများ (၅၇.၇၀%) ပါဝင်သည်။ အသက် 14-18 နှစ်ပေါင်း ... ။
... တတိယအုပ်စုကိုနမူနာ၏ 12.0% (= = 142) ပါဝင်သော CSBs အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် CSB နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်စိတ်ကူးယဉ်သူများပါသောမြီးကောင်ပေါက်များသည်ယောက်ျားလေးများဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် (၇၃.၈% နှင့် ၇၀.၅% အသီးသီး) ။
[ခန့်မှန်းခြေ CSB နှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအ 72% ပေးသောနည်းလမ်းများယောက်ျားလေးများဖြစ်ကြသည် အထီးဘာသာရပ်များအကြားတွင် CSB နှုန်းခဲ့သည် ~ 20% နှင့် <6% အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များအကြားတွင်။ ]
ခကျခဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုကျတှနျးထား, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း (2018) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ၏ပျံ့နှံ့
comments: အောက်မှာစစ်တမ်းယူသူစမတ်ဖုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်သည့်အခါ 18 အောက်မှာဖြစ်နှင့်သောသူတို့အပါအဝင်အန္တရာယ်အများဆုံးနေသောသူတို့ကိုအတွက်ပြဿနာများ (နှစ်တစ်ထောင်အထီးအုပ်စုသည်), အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
18 နှင့် 50 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားသင်တန်းသားများကိုကျပန်းနိုဝင်ဘာလ 50 အားလုံးကို 2016 အမေရိကန်ပြည်နယ်များထံမှနမူနာခဲ့ကြသည်။ [ပေမဲ့အသက်အရွယ် 34]
... လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းထားသောဤစစ်တမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောနမူနာများ၏ 8.6% (အမျိုးသမီးများ၏ 7.0% နှင့်အမျိုးသားများ၏ 10.3%) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များကို, တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အခက်အခဲနှင့်ဆက်စပ်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းအဆင့်ဆင့်ထောက်ခံခဲ့သည်။
... ဤကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများ၏အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ sociocultural ပြဿနာအဖြစ်အဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆက်စပ်မှုရှိပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများကအသိအမှတ်ပြုခံရသင့်ကြောင်းသိသိသာသာလက်တွေ့ပြဿနာဖော်ပြသည်။
... 2325 လူကြီးများအနက် (1174 [50.5%] အမျိုးသမီး; ယုတ် [SD က] အသက်, 34.0 [9.3] အနှစ်), 201 [8.6%] တစ်ဦး 35 ၏ရမှတ်ဒါမှမဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားများ၏လက်တွေ့မျက်နှာပြင်ဖြတ်အမှတ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
…လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ နိမ့်ကျသောပညာရေးရှိသူများ၊ ၀ င်ငွေအလွန်မြင့်မားသော (သို့) ၀ င်ငွေအလွန်နည်းပါးသောလူနည်းစု၊ လူမျိုးရေး / လူမျိုးစုလူနည်းစုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုများသည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးရှိကြောင်းတင်ပြသူများထက်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျမှုကိုတွေ့နိုင်သည် အလယ်အလတ်ဝင်ငွေနှင့်အဖြူနှင့်လိင်ကွဲဖြစ်ခြင်း။
အသုံးပြုမှု, တဏှာနှင့်ပြဿနာအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အနုတ်စိတျလှုပျရှားမှု (2019) ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့် Duration:
1070 ကောလိပ်ကျောင်းသားများအထဲကနေဒေတာကိုကျောင်းသားများ 20.63% ပြဿနာ OSAs အသုံးပြုမှုအန္တရာယ်မှာရှိ၏, ဤအုပ်စုသည် OSAs ပိုမိုအကြိမ်ရေ ပို. အသုံးပြုမှုအချိန်မြင့်မားတဲ့ညစ်ညမ်းတဏှာနှင့်ပိုပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောပညာရေးစိတ်ခံစားမှုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
ပြဿနာအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အန္တရာယ်မှာတရုတ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများက (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း) ၏ 21% ။ frequency ကြည့်ရှု၏ကြာချိန်ထက်ပိုပြဿနာများကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးဖြေဆိုသူ 47% ကိုသူတို့စောင့်ကြည့် porn ၏ပမာဏနှင့်အတူအဆင်ပြေခဲ့ကြပေမဲ့လည်းယောက်ျား၏ 15% သူတို့အမျိုးသမီးတွေ 5% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သိပ်စောင့်ကြည့်စဉ်းစားမိတယ်။ ယောက်ျား၏အချို့ 31% သူတို့ porn စွဲခဲ့ချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေသာ 14% တူညီဆိုပါတယ်ခံစားရတယ်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကျိုးဆက်များ: အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ (2019)
[PDF ကိုအထက် link ကိုမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ] စပိန်စကားပြောဘာသာရပ်များ။
သြစတြေးလျအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile: ကျန်းမာရေးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ဒုတိယအချက်သြစတြေးလျလေ့လာမှု (2016) မှစ. တွေ့ရှိချက်
comments: အချို့သောသူများကဤလေ့လာမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ကြီးလေးသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဟုငြင်းဆိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးသား ၄ ရာခိုင်နှုန်းကသာသူတို့သည်လိင်အရစွဲလမ်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ခေါင်းစဉ်များဆားနှင့်အတူခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ယူအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
သို့သော်၊ အသက် ၁၆ မှ ၃၀ ကြားရှိသူများအတွက်ဖြစ်သည် မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့လူနည်းစု။ လေ့လာမှုမှာစားပွဲတင်5အဆိုအရဒီအသက်အရွယ်အုပ်စု 17% ညစ်ညမ်းသုံးပြီးသူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်. (ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လူ ၆၀-၆၉ တွင် ၇.၂% သာလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ )
စာရေးသူဟာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကြောင့်နီးပါး 1 အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောဤလေ့လာမှုကနေခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်5အတွက်ပါပြီမယ်လို့လူငယ်များကြောင်း porn အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး "သူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု" ခဲ့ယုံကြည်သည်? အင်တာနက်ပြဿနာများအတွက်အန္တရာယ်အများဆုံးထက်အုပ်စု - အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလျစ်လျူရှုနှင့် Cross-Section ရလဒ်များကိုအာရုံစိုက်ဖွငျ့ဤတွေ့ရှိချက်မှေးမှိန်စေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တာလဲ
ဒါဟာအသက်အရွယ်အုပ်စုများ 16-69, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း spanning cross-section ကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာလုလင်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အဓိကအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်ကြောင်းထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့အမျိုးသမီး 25 လူ% နှင့် 60% သည်လွန်ခဲ့သော 12 လအတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် porn ကြည့်ရှုအားပေးမပေးခဲ့သည်။ အရှင်စာရင်းဇယားမှာ-အန္တရာယ်အသုံးပြုသူများအ veiling နေဖြင့်ထိုပြဿနာကို minimize သိမ်းယူကြ၏။
သူတို့ကနောက်ဆုံး 12 လအတွင်း porn ကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်တန်းသားများကိုမေးမွနျးထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်း, အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ porn အသုံးပြုမှုကိုတွက်ချက်မထားဘူး။ ဥပမာ, porn site ကို Pop-up သို့ငြာသူတစ်ဦးအမာခံ porn မှ3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် masturbates သူတစ်ဦးအနေဖြင့်မပါကွဲပြားခြားနားသောစဉ်းစားသည်။
စစ်တမ်းသူတွေကိုလွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သော "အစဉ်အဆက် porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့" သူမြား၏မေးလြှောကျလြှငျ, အခါ, သို့သော်, အမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းသည်ခဲ့သည် ဆယ်ကျော်သက် အုပ်စုတစု။ သူတို့ထဲက 93.4% 20 မှာပဲသူတို့ကိုနောက်ကွယ်က 29-88.6 တစ်နှစ်ကြားရှိနှင့်တကွ, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။
ဒေတာကိုအောက်တိုဘာလ 2012 နှင့်နိုဝင်ဘာလ 2013 အကြား၌စုဝေးခဲ့ပါတယ်။ အမှုအရာ, နောက်ဆုံး4နှစ်အတွင်းစမတ်ဖုန်းထိုးဖောက်မှုမှကျေးဇူးတင်စကားအများကြီးပြောင်းလဲပြီ - အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောအသုံးပြုသူများကိုပါ။
မေးခွန်းလွှာကွန်ပျူတာ-ကူညီထဲမှာမေးမွနျးခဲ့သညျ တယ်လီဖုန်း အင်တာဗျူးများ။ ဒါဟာအင်တာဗျူးထိုကဲ့သို့သော porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ်အထိခိုက်မခံဘာသာရပ်များအကြောင်းကိုများမှာအထူးသဖြင့်အခါ, လုံးဝအမည်မသိအင်တာဗျူးတွင်ပိုမိုလာမည့်ဖြစ်ဖို့လူ့သဘောသဘာဝပါပဲ။
အဆိုပါမေးခွန်းများကို Self-အမြင်အပေါ်သို့သက်သက်သာအခြေခံထားတယ်။ စွဲခဲစွဲအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမြင်သောစိတ်ကိုထားပါ။ တကယ်တော့, အများဆုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကသူတို့အနေနဲ့တိုးချဲ့ကာလအတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်မဟုတ်လျှင် porn အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေချိတ်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုတိကျစွာ porn စွဲနှင့်သုံးစွဲသူများ porn ရဲ့သက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးအကဲဖြတ်ကြလိမ့်မည်သည့်စံချိန်စံညွှန်းမီမေးခွန်း (အမည်ဝှက်ပေးထားသော), employ ခဲ့ပါဘူး။
နောက်တကြိမ်အနည်းငယ်ပုံမှန် porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းကောင်းစွာသူတို့သုံးပြီးငြိမ်းပြီးနောက်သည်အထိသူတို့ကိုထိခိုက်လျက်ရှိသည်ကိုမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်။ မကြာခဏဟောင်းအသုံးပြုသူများကိုအပြည့်အဝအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့လပေါင်းများစွာလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဒီတစ်ခုကဲ့သို့လေ့လာမှုအဓိကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။
ပျမ်းမျှကျောင်းသားများ၏အသက်သည် ၂၂.၀ ± ၁.၁ နှစ်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျား (p <22,0) [နှင့်] အမျိုးသမီးများ (1,1%) အကြား ... (5.7%) တွင်ဖော်ထုတ် porn ဆိုဒ်များမှရောဂါဗေဒစိတ်အားထက်သန်မှု။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြmနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားတွင်လေ့လာမှုတစ်ခု (၂၀၂၁)
၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အဟန့်အတားရှိသည်ဟုဖြေကြားခဲ့ကြပြီး ၅ ဦး အနက် ၄ ဦး မှာအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ ၆% သာလျှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုဖြေသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲများကြောင့်နေ့စဉ်ဘဝပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသလား?” ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တာရှည်ချိုးမခံဘဲပြproblemsနာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်အကဲဖြတ်နိုင်မလဲ။ သူတို့မတတ်နိုင်ကြဘူး။
နှုန်း - CSBD အတွက်ကုသမှုခံယူသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြwithနာတွေကိုအစီရင်ခံကြတယ်
ဂျေကက်စထရို -Calvo၊ V. Cervigón-Carrasco၊ R. Ballester-Arnal၊ ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ - စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, စွဲလမ်းစေအပြုအမူအစီရင်ခံစာများ, အတွဲ 13, 2021,
100345, ISSN 2352-8532, https://doi.org/10.1016/j.abrep.2021.100345 ။
ကောက်နုတ်ချက်: Wéry et al ။ (၂၀၁၅) Self- ဖော်ထုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ 90.1 ၏နမူနာ၏ 72% PPU ဟာသူတို့ရဲ့အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည် HD အတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုမှရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီသည် (ရိဒ် et al ။ , 2012ဒီအခြေအနေကုသမှုရှာကြံ 81.1 လူနာနမူနာ၏ 152% PPU ဟာသူတို့ရဲ့အဓိကပြaticနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ် PPU သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ရသော။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, Bőthe et al ။ (2020) တစ် ဦး ချင်းစီကိုပြ-နာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများကိုအမျိုးအစားအလိုက်ဒေတာဖြင့်မောင်းနှင်သည့်နည်းဖြင့် HD အတိုင်းအတာဖြင့်စနစ်တကျပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤအတိုင်းအတာများရှိရမှတ်များသည်အခြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (အပြာစာပေအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအပါအ ၀ င်) ထက်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံသော်လည်းပြproblemနာနှင့်ပြpornနာမရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်။
အီး Kowalewska, အမ် Wordecha, အမ် Lew-Starowicz, SW Kraus နှင့် MN Potenza နှင့်အတူပိုလန်, Mateusz Gola, ပိုလန်မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိချက်များ, ညီလာခံ: အမူအကျင့်စွဲလမ်းအပေါ် 5th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ (ICBA 2018): Cologne, ဂျာမနီ
ကောက်နုတ်ချက်CSB အတွက်ကုသမှုခံယူနေတဲ့လူတစ် ဦး ချင်းစီရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ နည်းလမ်းများ - မေးခွန်းလွှာအချက်အလက်များကိုပိုလန်နိုင်ငံရှိ CSB အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုစိတ်လိုကိုယ်လျောက်ရှာဖွေသူ ၈၄၇ ယောက် (ယောက်ျား ၈၁၁ ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၃၆ ယောက်) မှကောက်ယူခဲ့သည်။ ရလဒ် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကို ၉၁% သောပြproblemနာများ၊ ၂၁% တွင်အခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအန္တရာယ်ရှိစေပြီး ၁၃% တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုပြproblemနာအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏ ၅ ပုံ ၄ ပုံ (၈၂%) သည်အဆိုပြုထားသော ICD847 CSBD စံနှုန်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ရိဒ်, RC, လက်သမား, BN, ချိတ်, JN, Garos, အက်စ်, Manning, JC, Gilliland, R. , ... Fong က, တီ (2012) ။ hypersexual disorder အတွက် DSM ‐5ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံစာ. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 9, 2868-2877 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x
ဤအခြေအနေကိုကုသရန်လူနာ ၁၅၂ ဦး ၏ ၈၁.၁% သည် PPU ကိုသူတို့၏အဓိကပြproblemနာဖြစ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်
A. အWéry, K. Vogelaere, G. Challet-Bouju, F.-X. Poudat, ဂျေ Caillon, D. Lever, ... အမ် Grall-Bronnec, အမူအကျင့်စွဲပြင်ပလူနာဆေးခန်းများတွင် Self- ဖော်ထုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, Jအမူအကျင့်စွဲ၏ ournal,5(4) (2016), စစ။ 623-630, 10.1556 / 2006.5.2016.071
၇၂.၁ လိင်ခွဲခြားမှုစွဲစွဲလမ်းသူ ၇၂ ယောက်၏နမူနာ ၉၀.၁% သည် PPU ကိုသူတို့၏အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အပြုအမူစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာပဉ္စမအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင် Mead D၊ ရှပ်အမ်ရုပ်ပုံနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသုတေသနစာတမ်းများ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 5: အောက်တိုဘာ 2018;2(25): 4-248 ။ https://doi.org/10.1080/10720162.2019.1578312
“ ပိုလန်မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုမှတွေ့ရှိချက်များ” မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဒီလေ့လာမှုကကြီးမားတဲ့ပိုလန်နမူနာမှာ ICD-6 မူကြမ်းထဲမှာ Compulsive Sexual Behaviour Disorder (72C11) ၏အဆိုပြုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် CSB ကိုကုသရန်ကြိုးစားသူများအကြား ICD-11 CSBD အတွက်အဆိုပြုထားသည့်စံနှုန်းများ၊ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့် hypersexual disorder ကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာခဲ့သည်။ CSB အတွက်ကုသမှုခံယူလိုသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကဲ့သို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ပိုလန်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများအား 1,812 ကုသမှုကိုရှာဖွေသူများက 93% သည်အထီးများဖြစ်သည်။ 86% သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံသည်၊ 87% သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံခြင်း၊ 18% သည်ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်စိုးရိမ်မှုများနှင့် 12% တွင်အခကြေးငွေပေးသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိသည်။ နမူနာ 35.69 နှစ်များ၏အသက်အရွယ် (SD = 9.78) ရှိခဲ့သည်။
နမူနာတွင် CSB အတွက်ကုသမှုကိုစိတ်ဝင်စားသော 50% မှ 72% မှ CSBD အတွက် ICD-11 အတွက်အဆိုပြုထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အသုံးအများဆုံးပြproblemနာအပြုအမူများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပါဝင်သည်။ Hypersexual Behaviour Inventory၊ Sexual စွဲလမ်းမှုစိစစ်ခြင်းနှင့် Brief Pornography Screener (BPS) တို့ကဲ့သို့သောစိစစ်ရေးကိရိယာများသည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ICD-11 အောက်ရှိ CSBD ရောဂါသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသူများသည်သူတို့၏ဘ ၀ အပေါ်အထူးသဖြင့်ဆက်နွယ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆိုးကျိုးများပိုမိုခံစားခဲ့ရသည်။